ကမ္ဘာ့ခရီးသွားနေ့ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကျင်းပနေတဲ့ အခမ်းအနားတွင် ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူကို ဆုအတုပေးမယ့် အရှုပ်တော်ပုံအကြောင်း ဖြေရှင်းပေးရန် တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ ဦးနေယံဦး ~ Myanmar Online News
ကမ္ဘာ့ခရီးသွားနေ့ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကျင်းပနေတဲ့ အခမ်းအနားတွင် ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူကို ဆုအတုပေးမယ့် အရှုပ်တော်ပုံအကြောင်း ဖြေရှင်းပေးရန် တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ ဦးနေယံဦး
ကမ္ဘာ့ခရီးသွားနေ့ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ယနေ့ကျင်းပနေတဲ့ အခမ်းအနားတွင် ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူကို ဆုအတုပေးမယ့် အရှုပ်တော်ပုံအကြောင်းကို ဦးနေယံဦးမှ ဖြေရှင်းပေးရန် တောင်းဆိုလိုက်ကြောင်း သိရပါသည်။
ဦးနေယံဦးမှ သူ၏ လူမှုကွန်ရက်တွင် ယခုလို ရေးသားဖော်ပြထားပါသည်။
ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူကို ဆုအတုပေးမယ့်အရှုပ်တော်ပုံမှာ အဓိကတာဝန်ရှိသူ နောက်တစ်ယောက် ကျန်ပါသေးတယ်။ သူက ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလားရေး Ministry of Hotels and Tourismရဲ့ ပြည်ထောင် စုဝန်ကြီးဖြစ်သူ ဦးအုန်းမောင်ပါ။ ဘာကြောင့် တာဝန်ရှိတာလဲ မပြောခင်၊ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတာ အကျဉ်းချုပ် ပြန်ရှင်းပြပါရစေ။
■ နေပြည်တော်မှာ စီစဉ်တဲ့ပွဲ
ဒီနေ့ စက်တင်ဘာ (၂၇) ရက်နေ့က ကမ္ဘာ့ခရီးသွားနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ခရီးသွားနေ့ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလားရေးဝန်ကြီးဌာနက နေပြည်တော်ရှိ MICC-2 မှာ အခမ်းအနားတစ်ခုကို ကျင်းပလျက်ရှိကြောင်း သိရပါသည်။
မူလစီစဉ်ထားပုံအရဆိုရင် ဒီအခမ်းအနားကို ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဥရောပကောင်စီ (European Council on Tourism and Trade - ECTT) က တက်ရောက်မှာဖြစ်ပြီး၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ခရီးစဉ်ဒေသဆုကို မြန်မာပြည်အား ပေးအပ်ချီးမြှင့်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူကိုလည်း ဥရောပခရီးသွားအကယ်ဒမီ (European Tourism Academy) ရဲ့ တော် ၀င်ပညာရှင်အဖြစ် တင်မြှောက်သွားအုံးမှာပါ။
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ဒု-သမ္မတရုံးဘက်ကတော့ ငါတို့ရဲ့ ကြိုးစားမှုကြောင့် အခုလို နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်ပြုတာပဲဆိုပြီး ပီတိတွေ ဖြာနေနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ECTT တို့ European Tourism Academy တို့ဆိုတာ ခိုင်မာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေ မဟုတ်ဘဲ ဆင်းရဲပြီး ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေကို အဓိက ပစ်မှတ်ထား ဂွင်ဖန်နေတဲ့ ရိုမေးနီးယားအခြေစိုက် အဖွဲ့တွေပါ။ သူတို့က ဥရောပသမ္မဂ European Union in Myanmar နဲ့လည်း ဘယ်လိုမှ ပတ်သက်မှု မရှိပါဘူး။
ဒီအဖွဲ့တွေက အတုတွေဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူတွေက ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာ အတင်းဝိုင်းအော်လို့ အခုတော့ ECTT ရဲ့ မြန်မာပြည် ခရီးစဉ်ပျက်သွားပါပြီ။ ECTT က ပေးမယ့်ဆုတွေကို လက်ခံတော့မှာ မဟုတ်ကြောင်း ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က သမ္မတရုံး Myanmar President Office က ထုတ်ပြန်ကြေငြာပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ သတိထားရမှာက သမ္မတရုံးက ထုတ်ပြန်တိုင်း အမှန်လို့ ယူဆလို့ မရပါဘူး။ ရှေ့မှာ တစ်ခါ ကျွန်တော်တို့ ကြုံခဲ့ဖူးပါပြီ။
ရာထူးဝန်အရှုပ်တော်ပုံကြီးကို ဒီနှစ်အစောပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေ ၀ိုင်းပြီးဖော်ထုတ်တော့၊ သမ္မတရုံးက ကျောင်းအတုတွေနဲ့ လက်တွဲတာကို ဇန်န၀ါရီလ (၄) ရက်နေ့မှာ ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီလို့ တရားဝင်ပြောခဲ့တာ ရှိပါတယ်။
သမ္မတရုံးပြောတာ မမှန်ပါဘူး။ ဇန်န၀ါရီလ (၇) ရက်နေ့အထိ မလေးရှားနဲ့ဟာဝိုင်ယီမှ တက္ကသိုလ်အမည်ခံ အဖွဲ့အစည်းအတုတွေနဲ့ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ Union Civil Service Board Myanmar ပတ်သက်နေကြောင်း ဓါတ်ပုံအထောက်အထားတွေအရ ကျွန်တော်တို့ သိခဲ့ရပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို ကျွန်တော့်ဆောင်းပါးမှာ ဖတ်လို့ရပါတယ်။
(ရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဗြောင်လိမ်နေသည်၊ ဘတ်ဂျက်တွေ ဘယ်နေရာမှာ သုံးနေလဲနှင့် အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်ပေးပါ။
ဒါကြောင့် အခုတစ်ခေါက်လည်း ECTT ပွဲ ပျက်သွားပြီလို့ သမ္မတရုံးကပြောသော်လည်း၊ ကျွန်တော်တို့ ယုံလို့ မရပါသေးဘူး။ တကယ်ပွဲပျက်၊ မပျက်ကို ဒီနေ့ နေပြည်တော်ကွန်ဖရင့်မှာ စောင့်ကြည့်ဖို့ လိုပါသေးတယ်။
ECTT က ဒု-သမ္မတနဲ့မြန်မာပြည်ကို ဆုပေးမယ့်အကြောင်း ဩစတြီးယားနိုင်ငံ၊ ဗီယင်နာမြို့ရှိ မြန်မာသံရုံးကို ချဉ်းကပ်ပါတယ်။ မြန်မာသံရုံးကနေတဆင့် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနကို ရောက်သွားပြီး ဒီကိစ္စတွေ ဆက်ဖြစ်သွားတာပါ။ ဒါကြောင့် Ministry of Hotels and Tourism ကို ဦးဆောင်နေတဲ့ ၀န်ကြီးဖြစ်သူ ဦးအုန်းမောင်က ခရီးသွားဆုအတုကိစ္စကို တာဝန်ခံဖို့ လိုပါတယ်။
မြန်မာပြည်ကိုလာမယ့် ECTT ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ (Delegation)မှာ လူငါးဦးပါမှာဖြစ်ပြီး၊ အဲဒီလူတွေကလည်း ပြဿနာမျိုးစုံနဲ့ သူတွေပါ။ သူတို့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကို မြန်မာတိုင်း(စ်) The Myanmar Times ရဲ့ သတင်းပေးပို့ချက်ကို ကိုးကားပြီး ကျွန်တော် ပြောပြပါမယ်။ အောက်ကအချက်အလက်တွေက မြန်မာတိုင်း(စ်)ကနေ ယူပါတယ်။
၁။ Dr. Anton Caragea
ECTT ရဲ့ ဥက္ကဌဖြစ်သူ ဒေါက်တာ Anton Caragea က ဒီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို ဦးဆောင်မှာပါ။ သူက ပါရဂူဘွဲ့အပါအ၀င် ဆုတံဆိပ်ပေါင်း မြောက်မြားစွာကို နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းပေါင်း များစွာကနေ ရယူထားတယ်လို့ သူရဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ စာအုပ်ပေါင်း (၂၀) နဲ့ ဆောင်းပါးပေါင်း (၃၀၀) ကျော်ကို ရေးသားခဲ့သူဖြစ်ပြီး၊ သူရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေကတော့ သမိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုသမိုင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊ ဘာသာရေးနဲ့ တခြား ကျွန်တော် ဘာသာတောင် ဘယ်လိုပြန်ရမယ်မှန်းမသိတဲ့ ဘာသာရပ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ပြဿနာက ဒါတွေက သူ့အပြောပဲရှိပြီး၊ လက်တွေ့မှာတော့ သူရေးထားတယ်ဆိုတဲ့ စာအုပ်၊ စာတမ်းတွေကို ဘယ်နေရာမှ ရှာလို့မတွေ့နိုင်တာပါပဲ။ ဒေါက်တာ Anton Caragea နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပါမောက္ခအဖြစ် စာသင်နေတဲ့ ရိုမေးနီးယားမှာရှိတဲ့ Spiru Haret University ဆိုတာကလည်း တက္ကသိုလ်အစစ်မဟုတ်ဘဲ၊ ကျောင်းအတုသာဖြစ်ကြောင်းကို သူတို့နိုင်ငံရဲ့ သတင်းထောက်တွေက ဖော်ထုတ်ထားပါတယ်။
၂။ တော်ဝင်ပညာရှင် Mircea Ionut Costea
သူကတော့ ဒု-သမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူကို တော်ဝင်ပညာရှင်အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်မယ့် European Tourism Academy ရဲ့ ဒါရိုက်တာဖြစ်သူပါ။ ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံမှာတော့ သူက လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုနဲ့ ပြဿနာတက်နေပါတယ်။ ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဟောင်းနဲ့ လွှတ်တော်အမတ်ဟောင်းနှစ်ယောက်က ရထားသံလမ်းတွေ ပြန်လည်ပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာ လာဘ်စားတယ်ဆိုပြီး တရားစွဲ ခံထားရပါတယ်။ ဒီအမှုတွဲထဲမှာ မြန်မာပြည်ကိုလာမယ့် Mircea Ionut Costea က ပါဝင်နေပြီး၊ သူ့ကို ရိုမေးနီးယားအာဏာပိုင်တွေက ယူရိုငွေ ၁.၅ မီလီယံ (မြန်မာငွေ သန်းနှစ်ထောင့်ငါးရာ) ပေးဆောင်ဖို့ ဒဏ်ငွေ ချထားပါတယ်။
၃။ Mihai Prundianu
ECTT ရဲ့ ကုန်သွယ်ရေးကော်မတီဥက္ကဌဖြစ်သူ Mihai Prundianu က စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး၊ သူလည်းပဲ ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံရဲ့ လာဘ်စားမှုတစ်ခုထဲ ပါဝင်ပတ်သက်နေပါတယ်။ ရိုမေးနီးယားအစိုးရရဲ့ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဖြစ်သူကို ၂၀၀၉-၂၀၁၅ ကာလအတွင်း လာဘ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီး အမှုဖွင့် ခံထားရပါတယ်။ သူ လာဘ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုသူက ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံမှာတော့ အကောင်ကြီးကြီး ရာထူးကြီးကြီးဖြစ်ပြီး၊ လာဘ်စားမှု၊ စာရွက်စာတမ်းအတုလုပ်မှု၊ ဒုစရိုက်ဂိုဏ်းတည်ထောင်မှုတိုနဲ့ တရားရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။
၄။ Pavel Avramoiu
သူက ECTT ရဲ့ ဟိုတယ်ဌာနကို ဦးဆောင်သူ ဒါရိုက်တာဖြစ်ပြီး၊ အရင်က ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံပိုင် ပုံနှိပ်စက်ကုမ္ပဏီကို အုပ်ချုပ်သူအဖြစ်လည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ရိုမေးနီးယားမီဒီယာတွေရဲ့ ဖော်ပြချက်အရတော့ သူသည် နိုင်ငံတော်ပိုင် ပုံနှိပ်စက်ကုမ္ပဏီကို ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပြုလုပ်ရောင်းချရာမှာ အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခတွေ ပါဝင်မှုရှိတယ်ဆိုပြီး အစွပ်စွဲ ခံထားရသူပါ။ သူအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ ပုံနှိပ်စက်ကုမ္ပဏီကိုလည်း ရိုမေးနီးယားအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့က စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။
၅။ Pop Stefan Zaharie
သူက ECTT ရှိ ခရီးသွားလုံခြုံရေးအကဲဖြတ်ဌာနရဲ့ ဌာနမှူးအဖြစ် တာဝန်ယူထားပါတယ်။ အင်တာနက်ရာဇ၀တ်မှုတွေကနေ ငွေကြေးခ၀ါချမှုအကြောင်းကို သုတေသနဆောင်းပါးတစ်စောင်ရေးဖူးထားပါတယ်။
ဒီလို ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်အတုမှာ စာသင်သူ၊ လာဘ်စားမှုကြောင့် တရားရင်ဆိုင်နေရသူ၊ အစိုးရအရာရှိကြီးတွေကို လာဘ်ထိုးမှုကြောင့် အမှုတွဲထဲ ပါနေသူ၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုဖြင့် နာမည်ပျက်ထွက်နေသူနဲ့ ငွေကြေးခ၀ါချမှုအကြောင်းကို ဆောင်းပါးရေးထားသူတွေကို မြန်မာအစိုးရက နေပြည်တော်ကို ဖိတ်ပြီး ဒု-သမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွာလာရေးဝန်ကြီး ဦးအုန်းမောင်တိုနဲ့ တွေ့ဆုံကာ အစည်းအဝေးကျင်းပဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။
ECTT ရဲ့ ငါးယောက်ပါ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို မြန်မာပြည်ခေါ်တာလည်း အစိုးရစရိတ်နဲ့ပါ။ သူတို့က ကမ္ဘာ့ခရီးသွားနေ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲကို နေပြည်တော်မှာ လာတက်မယ့်အပြင်၊ ဆုပေးပွဲမတိုင်ခင် မန္တလေး၊ အင်းဝ၊ ရန်ကုန်၊ အမရပူရ၊ အင်လေးကန်နဲ့ ပဲခူးတို့လို နိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်သည်တွေ အသွားများတဲ့ ဒေသတွေကို မြန်မာပြည်အစိုးရအစီအစဉ်နဲ့ လိုက်လည်အုံးမှာပါ။
သူတိုရဲ့ ခရီးစဉ်ကုန်ကျစရိတ်ကို ကျွန်တော် အကြမ်းဖျင်းတွက်ကြည့်တာတော့ ဒေါ်လာ ၂၈,၀၀၀ ( မြန်မာငွေ သိန်း ၄၂၀ ကျော်) ကျပါတယ်။ ဒါတောင် ကျွန်တော် စဉ်းစားမိသလောက် ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုပဲ တွက်ထားတာပါ။ တခြားဟာတွေ မထည့်ရသေးပါဘူး။
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနက ECTT ကိစ္စမှာ အဓိက သက်ဆိုင်တာမို့ ၀န်ကြီးဖြစ်သူ ဦးအုန်းမောင်က ခရီးသွားဆုအတုကိစ္စကို တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းဖို့ လိုပါတယ်။ သမ္မတရုံးက ECTT ဆုတွေကို လက်မခံတော့ဘူးဆိုပြီး ကြေငြာလိုက်တာနဲ့ ဒီကိစ္စက ပြီးဆုံးသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ပြည်သူတွေ ၀န်ကြီးဦးအုန်းမောင်ဆီက သိချင်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေက
- ဘာကြောင့် ဒီလို ခိုင်မာမှုမရှိတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ ပူးပေါင်းဖို့ ဖြစ်လာတာလဲ။
- ဘာကြောင့် လာဘ်စားမှုတွေနဲ့တရားစွဲခံထားရတဲ့သူတွေကို မြန်မာပြည်ကို ဖိတ်တာလဲ။
- နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်လို အကြောင်းအရာတွေ ပါဝင်နေလဲ။ ရိုးကော ရိုးရဲ့လား။
အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေမှာတော့ နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာကို မစိစစ်ဘဲ သုံးစွဲခဲ့လို့ နိုင်ငံတော်ဘက်က နစ်နာမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ရင် အဂတိလိုက်စားမှုမြောက်တယ်လို့ အတိအလင်းရေးထားပါတယ်။
- ဒါကြောင့် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်က အဂတိလိုက်စားမှုမြောက်နိုင်လား။
- ဒီအဖွဲ့တွေကြောင့် နိုင်ငံတော်ဘက်က ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှု ဘယ်လောက်တောင် ဖြစ်ခဲ့ရပြီလဲ။ (ဂုဏ်သိက္ခာဆုံးရှုံးမှုတော့ ဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။)
- ၂၀၁၄ တုန်းက ငြင်းပယ်ခဲ့တဲ့ဆုကို ဘာဖြစ်လို့ ၂၀၁၉ မှာ လက်ခံလိုက်တာလဲ။
- ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ တာဝန်ခံမှု/တာဝန်ယူမှု၊ ပြည်သူတွေကို အလေးထားမှုတွေလိုပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ECTT က ပေးမယ့် ခရီးသွားဆုအတုအကြောင်းကို ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနက အခုအထိ တစုံတရာ မရှင်းပြသေးတာလဲ။
ဒီလိုမေးခွန်းတွေကို ၀န်ကြီးဖြစ်သူ ဦးအုန်းမောင်က တာဝန်ယှုမှုရှိရှိ ဖြေရှင်းပေးဖို့ လိုပါတယ်။
အခုဆောင်းပါးကို ဖတ်နေသူတွေထဲမှာ သတင်းထောက်တွေရှိရင် နေပြည်တော်မှာ ဒီနေ့ကျင်းပနေတဲ့ ကမ္ဘာ့ခရီးသွားနေ့ပွဲတော်မှာ ၀န်ကြီးဦးအုန်းမောင်ကို တွေ့အောင်ရှာပြီး အပေါ်က မေးခွန်းတွေကို မေးပေးစေလိုပါတယ်။
၀န်ကြီးဖြစ်သူတွေက ပြည်သူတွေနဲ့ ကင်းကွာကာ နေပြည်တော်မှာပဲ နေလေ့ရှိပြီး၊ ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာရင်လည်း ထွက်ရှင်းတာမျိုး မလုပ်ဘဲ မီဒီယာကို ရှောင်လေ့ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီနေ့လို ၀န်ကြီးဦးအုန်းမောင် ပြည်သူတွေကြားထဲ ဆင်းတဲ့အချိန်မျိုးက အခါအခွင့်ကောင်းပါပဲ။ ပြည်သူတွေ သိချင်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ၀န်ကြီးဖြစ်သူ ရှောင်ထွက်လို့ မရအောင် မေးခဲ့ပေးပါ။
၀န်ကြီးခင်ဗျာ . . . #ပြည်သူကိုဖြေရှင်းပါ။
ဒု-သမ္မတကြီးကိုပေးအပ်မယ့် “ဆုအတု” (အပိုင်း-၂) -
#Nay_Yan_Oo #ဆုအတု #VicePresident #HenryVanThio #fakeawards#MinistryofHotelsandTourism #WorldTourismDay #ပြည်သူကိုဖြေရှင်းပါ။
ကမ်ဘာ့ခရီးသှားနကေို့ ဂုဏျပွုတဲ့အနနေဲ့ ဟိုတယျနှငျ့ခရီးသှားလားရေးဝနျကွီးဌာနမှ ကငျြးပနတေဲ့ အခမျးအနားတှငျ ဒုတိယသမ်မတ ဦးဟငျနရီဗနျထီးယူကို ဆုအတုပေးမယျ့ အရှုပျတျောပုံအကွောငျး ဖွရှေငျးပေးရနျ တောငျးဆိုလိုကျတဲ့ ဦးနယေံဦး
ကမ်ဘာ့ခရီးသှားနကေို့ ဂုဏျပွုတဲ့အနနေဲ့ ဟိုတယျနှငျ့ခရီးသှားလားရေးဝနျကွီးဌာနမှ ယနကေ့ငျြးပနတေဲ့ အခမျးအနားတှငျ ဒုတိယသမ်မတ ဦးဟငျနရီဗနျထီးယူကို ဆုအတုပေးမယျ့ အရှုပျတျောပုံအကွောငျးကို ဦးနယေံဦးမှ ဖွရှေငျးပေးရနျ တောငျးဆိုလိုကျကွောငျး သိရပါသညျ။
ဦးနယေံဦးမှ သူ၏ လူမှုကှနျရကျတှငျ ယခုလို ရေးသားဖျောပွထားပါသညျ။
ဒုတိယသမ်မတ ဦးဟငျနရီဗနျထီးယူကို ဆုအတုပေးမယျ့အရှုပျတျောပုံမှာ အဓိကတာဝနျရှိသူ နောကျတဈယောကျ ကနျြပါသေးတယျ။ သူက ဟိုတယျနှငျ့ခရီးသှားလားရေး Ministry of Hotels and Tourismရဲ့ ပွညျထောငျ စုဝနျကွီးဖွဈသူ ဦးအုနျးမောငျပါ။ ဘာကွောငျ့ တာဝနျရှိတာလဲ မပွောခငျ၊ ဘာတှဖွေဈခဲ့သလဲဆိုတာ အကဉျြးခြုပျ ပွနျရှငျးပွပါရစေ။
■ နပွေညျတျောမှာ စီစဉျတဲ့ပှဲ
ဒီနေ့ စကျတငျဘာ (၂၇) ရကျနကေ့ ကမ်ဘာ့ခရီးသှားနဖွေ့ဈပါတယျ။ ကမ်ဘာ့ခရီးသှားနကေို့ ဂုဏျပွုတဲ့အနနေဲ့ ဟိုတယျနှငျ့ခရီးသှားလားရေးဝနျကွီးဌာနက နပွေညျတျောရှိ MICC-2 မှာ အခမျးအနားတဈခုကို ကငျြးပလကျြရှိကွောငျး သိရပါသညျ။
မူလစီစဉျထားပုံအရဆိုရငျ ဒီအခမျးအနားကို ခရီးသှားလုပျငနျးနှငျ့ကုနျသှယျရေးဆိုငျရာ ဥရောပကောငျစီ (European Council on Tourism and Trade - ECTT) က တကျရောကျမှာဖွဈပွီး၊ ၂၀၁၉ ခုနှဈအတှကျ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး ခရီးစဉျဒသေဆုကို မွနျမာပွညျအား ပေးအပျခြီးမွှငျ့သှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဒုတိယသမ်မတ ဦးဟငျနရီဗနျထီးယူကိုလညျး ဥရောပခရီးသှားအကယျဒမီ (European Tourism Academy) ရဲ့ တျော ဝငျပညာရှငျအဖွဈ တငျမွှောကျသှားအုံးမှာပါ။
ဟိုတယျနှငျ့ခရီးသှားလားရေးဝနျကွီးဌာနနဲ့ ဒု-သမ်မတရုံးဘကျကတော့ ငါတို့ရဲ့ ကွိုးစားမှုကွောငျ့ အခုလို နိုငျငံတကာက အသိအမှတျပွုတာပဲဆိုပွီး ပီတိတှေ ဖွာနနေိုငျပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ ECTT တို့ European Tourism Academy တို့ဆိုတာ ခိုငျမာတဲ့အဖှဲ့အစညျးတှေ မဟုတျဘဲ ဆငျးရဲပွီး ဖှံ့ဖွိုးဆဲနိုငျငံတှကေို အဓိက ပဈမှတျထား ဂှငျဖနျနတေဲ့ ရိုမေးနီးယားအခွစေိုကျ အဖှဲ့တှပေါ။ သူတို့က ဥရောပသမ်မဂ European Union in Myanmar နဲ့လညျး ဘယျလိုမှ ပတျသကျမှု မရှိပါဘူး။
ဒီအဖှဲ့တှကေ အတုတှဖွေဈကွောငျး ပွညျသူတှကေ ဖစျေ့ဘှတျချပျေါမှာ အတငျးဝိုငျးအျောလို့ အခုတော့ ECTT ရဲ့ မွနျမာပွညျ ခရီးစဉျပကျြသှားပါပွီ။ ECTT က ပေးမယျ့ဆုတှကေို လကျခံတော့မှာ မဟုတျကွောငျး ပွီးခဲ့တဲ့အပတျက သမ်မတရုံး Myanmar President Office က ထုတျပွနျကွငွောပါတယျ။
ဒီနရောမှာ ကြှနျတျောတို့ သတိထားရမှာက သမ်မတရုံးက ထုတျပွနျတိုငျး အမှနျလို့ ယူဆလို့ မရပါဘူး။ ရှမှေ့ာ တဈခါ ကြှနျတျောတို့ ကွုံခဲ့ဖူးပါပွီ။
ရာထူးဝနျအရှုပျတျောပုံကွီးကို ဒီနှဈအစောပိုငျးမှာ ကြှနျတျောတို့ပွညျသူတှေ ဝိုငျးပွီးဖျောထုတျတော့၊ သမ်မတရုံးက ကြောငျးအတုတှနေဲ့ လကျတှဲတာကို ဇနျနဝါရီလ (၄) ရကျနမှေ့ာ ရပျဆိုငျးလိုကျပွီလို့ တရားဝငျပွောခဲ့တာ ရှိပါတယျ။
သမ်မတရုံးပွောတာ မမှနျပါဘူး။ ဇနျနဝါရီလ (၇) ရကျနအေ့ထိ မလေးရှားနဲ့ဟာဝိုငျယီမှ တက်ကသိုလျအမညျခံ အဖှဲ့အစညျးအတုတှနေဲ့ ပွညျထောငျစုရာထူးဝနျအဖှဲ့ Union Civil Service Board Myanmar ပတျသကျနကွေောငျး ဓါတျပုံအထောကျအထားတှအေရ ကြှနျတျောတို့ သိခဲ့ရပါတယျ။ အသေးစိတျကို ကြှနျတေျာ့ဆောငျးပါးမှာ ဖတျလို့ရပါတယျ။
(ရာထူးဝနျအဖှဲ့ ဗွောငျလိမျနသေညျ၊ ဘတျဂကျြတှေ ဘယျနရောမှာ သုံးနလေဲနှငျ့ အမှနျတရားကို ဖျောထုတျပေးပါ။
ဒါကွောငျ့ အခုတဈခေါကျလညျး ECTT ပှဲ ပကျြသှားပွီလို့ သမ်မတရုံးကပွောသျောလညျး၊ ကြှနျတျောတို့ ယုံလို့ မရပါသေးဘူး။ တကယျပှဲပကျြ၊ မပကျြကို ဒီနေ့ နပွေညျတျောကှနျဖရငျ့မှာ စောငျ့ကွညျ့ဖို့ လိုပါသေးတယျ။
ECTT က ဒု-သမ်မတနဲ့မွနျမာပွညျကို ဆုပေးမယျ့အကွောငျး ဩစတွီးယားနိုငျငံ၊ ဗီယငျနာမွို့ရှိ မွနျမာသံရုံးကို ခဉျြးကပျပါတယျ။ မွနျမာသံရုံးကနတေဆငျ့ ဟိုတယျနှငျ့ခရီးသှားလာရေးဝနျကွီးဌာနကို ရောကျသှားပွီး ဒီကိစ်စတှေ ဆကျဖွဈသှားတာပါ။ ဒါကွောငျ့ Ministry of Hotels and Tourism ကို ဦးဆောငျနတေဲ့ ဝနျကွီးဖွဈသူ ဦးအုနျးမောငျက ခရီးသှားဆုအတုကိစ်စကို တာဝနျခံဖို့ လိုပါတယျ။
မွနျမာပွညျကိုလာမယျ့ ECTT ရဲ့ ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့ (Delegation)မှာ လူငါးဦးပါမှာဖွဈပွီး၊ အဲဒီလူတှကေလညျး ပွဿနာမြိုးစုံနဲ့ သူတှပေါ။ သူတို့ဘယျသူတှလေဲဆိုတာကို မွနျမာတိုငျး(ဈ) The Myanmar Times ရဲ့ သတငျးပေးပို့ခကျြကို ကိုးကားပွီး ကြှနျတျော ပွောပွပါမယျ။ အောကျကအခကျြအလကျတှကေ မွနျမာတိုငျး(ဈ)ကနေ ယူပါတယျ။
ECTT ရဲ့ ဥက်ကဌဖွဈသူ ဒေါကျတာ Anton Caragea က ဒီကိုယျစားလှယျအဖှဲ့ကို ဦးဆောငျမှာပါ။ သူက ပါရဂူဘှဲ့အပါအဝငျ ဆုတံဆိပျပေါငျး မွောကျမွားစှာကို နိုငျငံတကာအဖှဲ့အစညျးပေါငျး မြားစှာကနေ ရယူထားတယျလို့ သူရဲ့ အငျတာနကျစာမကျြနှာမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။ စာအုပျပေါငျး (၂၀) နဲ့ ဆောငျးပါးပေါငျး (၃၀၀) ကြျောကို ရေးသားခဲ့သူဖွဈပွီး၊ သူရဲ့ ကြှမျးကငျြမှုတှကေတော့ သမိုငျး၊ ယဉျကြေးမှုသမိုငျး၊ ဖှံ့ဖွိုးရေး၊ နိုငျငံရေး၊ နိုငျငံတကာဆကျဆံရေး၊ ဘာသာရေးနဲ့ တခွား ကြှနျတျော ဘာသာတောငျ ဘယျလိုပွနျရမယျမှနျးမသိတဲ့ ဘာသာရပျတှေ ပါဝငျပါတယျ။
ပွဿနာက ဒါတှကေ သူ့အပွောပဲရှိပွီး၊ လကျတှမှေ့ာတော့ သူရေးထားတယျဆိုတဲ့ စာအုပျ၊ စာတမျးတှကေို ဘယျနရောမှ ရှာလို့မတှနေို့ငျတာပါပဲ။ ဒေါကျတာ Anton Caragea နိုငျငံတကာဆကျဆံရေးပါမောက်ခအဖွဈ စာသငျနတေဲ့ ရိုမေးနီးယားမှာရှိတဲ့ Spiru Haret University ဆိုတာကလညျး တက်ကသိုလျအစဈမဟုတျဘဲ၊ ကြောငျးအတုသာဖွဈကွောငျးကို သူတို့နိုငျငံရဲ့ သတငျးထောကျတှကေ ဖျောထုတျထားပါတယျ။
၂။ တျောဝငျပညာရှငျ Mircea Ionut Costea
သူကတော့ ဒု-သမ်မတ ဦးဟငျနရီဗနျထီးယူကို တျောဝငျပညာရှငျအဖွဈ ရှေးခယျြတငျမွှောကျမယျ့ European Tourism Academy ရဲ့ ဒါရိုကျတာဖွဈသူပါ။ ရိုမေးနီးယားနိုငျငံမှာတော့ သူက လာဘျပေးလာဘျယူမှုနဲ့ ပွဿနာတကျနပေါတယျ။ ရိုမေးနီးယားနိုငျငံရဲ့ ဘဏ်ဍာရေးဝနျကွီးဟောငျးနဲ့ လှတျတျောအမတျဟောငျးနှဈယောကျက ရထားသံလမျးတှေ ပွနျလညျပွငျဆငျတဲ့နရောမှာ လာဘျစားတယျဆိုပွီး တရားစှဲ ခံထားရပါတယျ။ ဒီအမှုတှဲထဲမှာ မွနျမာပွညျကိုလာမယျ့ Mircea Ionut Costea က ပါဝငျနပွေီး၊ သူ့ကို ရိုမေးနီးယားအာဏာပိုငျတှကေ ယူရိုငှေ ၁.၅ မီလီယံ (မွနျမာငှေ သနျးနှဈထောငျ့ငါးရာ) ပေးဆောငျဖို့ ဒဏျငှေ ခထြားပါတယျ။
ECTT ရဲ့ ကုနျသှယျရေးကျောမတီဥက်ကဌဖွဈသူ Mihai Prundianu က စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျ တဈယောကျဖွဈပွီး၊ သူလညျးပဲ ရိုမေးနီးယားနိုငျငံရဲ့ လာဘျစားမှုတဈခုထဲ ပါဝငျပတျသကျနပေါတယျ။ ရိုမေးနီးယားအစိုးရရဲ့ အထှထှေအေတှငျးရေးမှူးခြုပျဖွဈသူကို ၂၀၀၉-၂၀၁၅ ကာလအတှငျး လာဘျပေးခဲ့တယျဆိုပွီး အမှုဖှငျ့ ခံထားရပါတယျ။ သူ လာဘျပေးခဲ့တယျဆိုသူက ရိုမေးနီးယားနိုငျငံမှာတော့ အကောငျကွီးကွီး ရာထူးကွီးကွီးဖွဈပွီး၊ လာဘျစားမှု၊ စာရှကျစာတမျးအတုလုပျမှု၊ ဒုစရိုကျဂိုဏျးတညျထောငျမှုတိုနဲ့ တရားရငျဆိုငျခဲ့ရပါတယျ။
သူက ECTT ရဲ့ ဟိုတယျဌာနကို ဦးဆောငျသူ ဒါရိုကျတာဖွဈပွီး၊ အရငျက ရိုမေးနီးယားနိုငျငံပိုငျ ပုံနှိပျစကျကုမ်ပဏီကို အုပျခြုပျသူအဖွဈလညျး တာဝနျထမျးဆောငျခဲ့ပါသေးတယျ။ ရိုမေးနီးယားမီဒီယာတှရေဲ့ ဖျောပွခကျြအရတော့ သူသညျ နိုငျငံတျောပိုငျ ပုံနှိပျစကျကုမ်ပဏီကို ပုဂ်ဂလိကပိုငျ ပွုလုပျရောငျးခရြာမှာ အကြိုးစီးပှားပဋိပက်ခတှေ ပါဝငျမှုရှိတယျဆိုပွီး အစှပျစှဲ ခံထားရသူပါ။ သူအုပျခြုပျခဲ့တဲ့ ပုံနှိပျစကျကုမ်ပဏီကိုလညျး ရိုမေးနီးယားအဂတိလိုကျစားမှုတိုကျဖကျြရေးအဖှဲ့က စုံစမျးစဈဆေးနပေါတယျ။
သူက ECTT ရှိ ခရီးသှားလုံခွုံရေးအကဲဖွတျဌာနရဲ့ ဌာနမှူးအဖွဈ တာဝနျယူထားပါတယျ။ အငျတာနကျရာဇဝတျမှုတှကေနေ ငှကွေေးခဝါခမြှုအကွောငျးကို သုတသေနဆောငျးပါးတဈစောငျရေးဖူးထားပါတယျ။
ဒီလို ရိုမေးနီးယားနိုငျငံရှိ တက်ကသိုလျအတုမှာ စာသငျသူ၊ လာဘျစားမှုကွောငျ့ တရားရငျဆိုငျနရေသူ၊ အစိုးရအရာရှိကွီးတှကေို လာဘျထိုးမှုကွောငျ့ အမှုတှဲထဲ ပါနသေူ၊ အကငျြ့ပကျြခွစားမှုဖွငျ့ နာမညျပကျြထှကျနသေူနဲ့ ငှကွေေးခဝါခမြှုအကွောငျးကို ဆောငျးပါးရေးထားသူတှကေို မွနျမာအစိုးရက နပွေညျတျောကို ဖိတျပွီး ဒု-သမ်မတ ဦးဟငျနရီဗနျထီးယူ၊ ဟိုတယျနှငျ့ခရီးသှာလာရေးဝနျကွီး ဦးအုနျးမောငျတိုနဲ့ တှဆေုံ့ကာ အစညျးအဝေးကငျြးပဖို့ စီစဉျထားပါတယျ။
ECTT ရဲ့ ငါးယောကျပါ ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့ကို မွနျမာပွညျချေါတာလညျး အစိုးရစရိတျနဲ့ပါ။ သူတို့က ကမ်ဘာ့ခရီးသှားနအေ့ထိမျးအမှတျပှဲကို နပွေညျတျောမှာ လာတကျမယျ့အပွငျ၊ ဆုပေးပှဲမတိုငျခငျ မန်တလေး၊ အငျးဝ၊ ရနျကုနျ၊ အမရပူရ၊ အငျလေးကနျနဲ့ ပဲခူးတို့လို နိုငျငံခွားခရီးသှားဧညျ့သညျတှေ အသှားမြားတဲ့ ဒသေတှကေို မွနျမာပွညျအစိုးရအစီအစဉျနဲ့ လိုကျလညျအုံးမှာပါ။
သူတိုရဲ့ ခရီးစဉျကုနျကစြရိတျကို ကြှနျတျော အကွမျးဖငျြးတှကျကွညျ့တာတော့ ဒျေါလာ ၂၈,၀၀၀ ( မွနျမာငှေ သိနျး ၄၂၀ ကြျော) ကပြါတယျ။ ဒါတောငျ ကြှနျတျော စဉျးစားမိသလောကျ ကုနျကစြရိတျတှကေိုပဲ တှကျထားတာပါ။ တခွားဟာတှေ မထညျ့ရသေးပါဘူး။
ဟိုတယျနှငျ့ခရီးသှားလာရေးဝနျကွီးဌာနက ECTT ကိစ်စမှာ အဓိက သကျဆိုငျတာမို့ ဝနျကွီးဖွဈသူ ဦးအုနျးမောငျက ခရီးသှားဆုအတုကိစ်စကို တာဝနျယူ ဖွရှေငျးဖို့ လိုပါတယျ။ သမ်မတရုံးက ECTT ဆုတှကေို လကျမခံတော့ဘူးဆိုပွီး ကွငွောလိုကျတာနဲ့ ဒီကိစ်စက ပွီးဆုံးသှားမှာ မဟုတျပါဘူး။
ပွညျသူတှေ ဝနျကွီးဦးအုနျးမောငျဆီက သိခငျြနတေဲ့ အကွောငျးအရာတှကေ
- ဘာကွောငျ့ ဒီလို ခိုငျမာမှုမရှိတဲ့အဖှဲ့တှနေဲ့ ပူးပေါငျးဖို့ ဖွဈလာတာလဲ။
- ဘာကွောငျ့ လာဘျစားမှုတှနေဲ့တရားစှဲခံထားရတဲ့သူတှကေို မွနျမာပွညျကို ဖိတျတာလဲ။
- နောကျကှယျမှာ ဘယျလို အကွောငျးအရာတှေ ပါဝငျနလေဲ။ ရိုးကော ရိုးရဲ့လား။
အဂတိလိုကျစားမှု တိုကျဖကျြရေးဥပဒမှောတော့ နိုငျငံတျောဘဏ်ဍာကို မစိစဈဘဲ သုံးစှဲခဲ့လို့ နိုငျငံတျောဘကျက နဈနာမှုတှေ ဖွဈခဲ့ရငျ အဂတိလိုကျစားမှုမွောကျတယျလို့ အတိအလငျးရေးထားပါတယျ။
- ဒါကွောငျ့ ဟိုတယျနှငျ့ခရီးသှားလာရေးဝနျကွီးဌာနရဲ့ လုပျဆောငျခကျြက အဂတိလိုကျစားမှုမွောကျနိုငျလား။
- ဒီအဖှဲ့တှကွေောငျ့ နိုငျငံတျောဘကျက ငှကွေေးဆုံးရှုံးမှု ဘယျလောကျတောငျ ဖွဈခဲ့ရပွီလဲ။ (ဂုဏျသိက်ခာဆုံးရှုံးမှုတော့ ဖွဈခဲ့ပါပွီ။)
- ၂၀၁၄ တုနျးက ငွငျးပယျခဲ့တဲ့ဆုကို ဘာဖွဈလို့ ၂၀၁၉ မှာ လကျခံလိုကျတာလဲ။
- ဒီမိုကရစေီစနဈမှာ ပှငျ့လငျးမွငျသာမှု၊ တာဝနျခံမှု/တာဝနျယူမှု၊ ပွညျသူတှကေို အလေးထားမှုတှလေိုပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့ ECTT က ပေးမယျ့ ခရီးသှားဆုအတုအကွောငျးကို ဟိုတယျနှငျ့ခရီးသှားလာရေးဝနျကွီးဌာနက အခုအထိ တစုံတရာ မရှငျးပွသေးတာလဲ။
ဒီလိုမေးခှနျးတှကေို ဝနျကွီးဖွဈသူ ဦးအုနျးမောငျက တာဝနျယှုမှုရှိရှိ ဖွရှေငျးပေးဖို့ လိုပါတယျ။
အခုဆောငျးပါးကို ဖတျနသေူတှထေဲမှာ သတငျးထောကျတှရှေိရငျ နပွေညျတျောမှာ ဒီနကေ့ငျြးပနတေဲ့ ကမ်ဘာ့ခရီးသှားနပှေဲ့တျောမှာ ဝနျကွီးဦးအုနျးမောငျကို တှအေ့ောငျရှာပွီး အပျေါက မေးခှနျးတှကေို မေးပေးစလေိုပါတယျ။
ဝနျကွီးဖွဈသူတှကေ ပွညျသူတှနေဲ့ ကငျးကှာကာ နပွေညျတျောမှာပဲ နလေရှေိ့ပွီး၊ ပွဿနာတှေ ဖွဈလာရငျလညျး ထှကျရှငျးတာမြိုး မလုပျဘဲ မီဒီယာကို ရှောငျလရှေိ့ပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ဒီနလေို့ ဝနျကွီးဦးအုနျးမောငျ ပွညျသူတှကွေားထဲ ဆငျးတဲ့အခြိနျမြိုးက အခါအခှငျ့ကောငျးပါပဲ။ ပွညျသူတှေ သိခငျြနတေဲ့ အကွောငျးအရာတှကေို ဝနျကွီးဖွဈသူ ရှောငျထှကျလို့ မရအောငျ မေးခဲ့ပေးပါ။
ဝနျကွီးခငျဗြာ . . . #ပွညျသူကိုဖွရှေငျးပါ။
ပွနျကွားရေး ဝနျကွီးဟောငျး ဦးရဲထှဋျ ပွောတဲ့ "အငျနျအယျလျဒီအစိုးရနဲ့ အတုပွဿနာ"
ဒု-သမ်မတကွီးကိုပေးအပျမယျ့ “ဆုအတု” (အပိုငျး-၂) -
#Nay_Yan_Oo #ဆုအတု #VicePresident #HenryVanThio #fakeawards#MinistryofHotelsandTourism #WorldTourismDay #ပွညျသူကိုဖွရှေငျးပါ။